Xeerka dhaxalka | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Barashada bulshada / Buuga "Om Sverige" / In waayeel lagu noqdo dalka Iswiidan / Xeerka dhaxalka
Marka u qof dhinto, waxaa jira xeerar ku saabsan qofka dhaxlaayo lacagta iyo alaabta qofka uu ka dhintay. Taasi waxeey ku qoran tahay sharciyada iIwiidhan, waxaana lagu magacaabaa xeerka dhaxalka.
Haddii qofka dhintay ay qof isqabeen, qofka laga dhintay ayaa dhaxalka wada qaadanayo. Carruurtu waxay wax dhaxlayaan marka qofka laga dhintay uu dhinto. Qofka laga dhintay, afada ama sayga, ayaa hantida dhaxalka sidii uu doono u isticmaalaya.
Haddiise qofka dhintay uu ka tegay carruur ay qof kale isu dhaleen, carruurtaas dhaxalkooda dhaqso ayaa loo siin karaa. Haddii doonaayaan waa sugi karaan in ee dhaxalkooda qaataan ilaa inta qofka ay qofka dhintay isqabeen unu ka dhimanayo. Haddii uusan jirin qof ay qofka dhintay isqabeen, waxaa dhaxalka oo dhan qaadanaya carruurta. Haddii eeysan caruuru jirin, waxaa dhaxlaya waalidka ama walaalaha qofka dhintay.
Haddii caruur waalidkood dhinto, waa in carruurta ka yar 18 sano loo qabto qof wakiil ah oo caawiyo. Wakiilka waa qof ilaalinayo in caruurta xuquuqdood loo dhameeystiro.
Hantida iyo deynta laga dhintay
Hantida iyo deynta laga dhintay waa dhammaan lacagta iyo hantida kale oo qofka dhintay ka tegay. Ehelka dhaxalka xaq uu leh ayaa wadawadaaga hantidaas.
Hanti-aybinta, liiska hantida iyo deynta iyo dhaxalqaybinta
Haddii qofka dhintay ay qof isqabeen oo hanti ka wadadhaxeeysay, waa in marka hore waxa dhan loo kala qeeybiyaa labadooda. Taasi waxaa lagu magacaabaa hantiqeeybinta. Marka hanti-qaybinta la dhammaystiro ayaa loo gudbaa qaybinta dhaxalka.
Liska hantida iyo deynta waa liis lagu qoro dhamaan waxii hanti ah iyo deeyn oo u ka dhintay qofka. Liiskas waa in la diyaariyey saddex bilood kadib marka qofku geeriyooday. Waxuu liskaas asal uu ahaana hanti-qeeybinta, oo ah qeeybinta hantida marxuumka.
Dardaaran qoraal ah
Dardaaranka qoraalka ah waa dokumenti sharci ah. Qofka qoro dardaaranka ayaa go'ansanaayo qofka dhaxlaayo iyo waxa uu dhaxli karo. Laakiin waxaa jira dad laga reebay. Tafiirta dhaxalka u hadha (qofka dhintay caruurtiisa, caruurta ee sii dhaleen ama caruurtaasna caruurtooda) waxeey markasto xaq uu lee yihiin in eey dalbadaan qeeybta ee dhaxalka ku lee yihiin.
Dardaaran markii la sameeynaayo waa in la raacaa xeerar gaar ah. Waa in dardaaranku qoraal ahaadaa. Waa in laba markhaanti saxiixdaa. Sidaas darteed ayee uu fiican tahay in lala tashado sharci-yaqaan inta aan la qorin dardaaran.
Dadka isla nool ayagoo isqabin (wada noole) si toos ah iskuma dhaxlaan. Haddi laba qof oo isla nool doonayaan in eey is dhaxlaan waa in ee qoraan dardaraan.